Kumeso Kuzivikanwa uko Kunotarisa Kupfuura neMask
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Kumeso Kuzivikanwa uko Kunotarisa Kupfuura neMask
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau • Video
ray hayut 768x432 1
Iyo yekuvhuvhuta yekunyepedzera-inofambiswa kumeso yekucherechedzwa system iyo inogona kuziva vanhu vakapfeka mamask yakaiswa nevamiriri vemitemo uye vamiriri vehungwaru pasi rese.
Yakagadziridzwa neCorsight AI, inotsigira yeTel Aviv-yakavakirwa komputa yekuona kambani Cortica, iyo tekinoroji inogona zvakare kuziva vanhu vari mune yakanyanya yakaderera-mwenje mamiriro.
Uchishandisa chirevo chemufananidzo kana vhidhiyo senzvimbo yekutanga, iyo system inogona ID vanhu vane zvishoma se40% yechiso chavo ichioneka, ichiita kuti ive yakakosha padenda rekonavirus.
"Ndinoona vazhinji vevatambi mumusika unozivikanwa kumeso uchinetsekana nemasikisi eCOVID-19, asi system yedu yakavakwa kubva paZuva rekutanga kuti tikwanise kuziva vanhu kubva pachikamu chechiso chete," Ofer Ronen, mutevedzeri wemutungamiri webhizinesi. kuvandudzwa kuCorsight AI, akaudza Iyo Media Line.
"Takavakwa kuti tiwane gandanga rimwe chete mukati mevanhu apo ari kuedza kuzvishandura," akadaro Ronen. "Saka hatidi chiso chakazara."
Ruzhinji rwekuona kumeso tekinoroji parizvino pamusika hadzina kumbobudirira zvakakwana kuti uzive kuzivikanwa kwevanhu kana kumeso kwavo kwakafukidzwa. Muna Kurume, kambani yeChinese Hanwang Technology Ltd. yakazivisa kuti yakanga yagadzirawo mhinduro inogona "kuona-kuburikidza" nemasikisi ayo vazhinji vakapfeka kumisa kupararira kwecoronavirus.
Corsight's system inogadzirisa ruzivo rwunotorwa kubva kumakamera ekuongorora, mifananidzo uye zvimwe zvinoonekwa zvekugadzira chimiro chemunhu. Vanoverengeka vevaongorori vayo vaimbova nhengo dzeIsrael 8200, yakasarudzika chiratidzo chehungwaru chikamu cheIDF
Kunyangwe hazvo kambani yakapedza kuvandudza masisitimu ayo masvondo mashoma apfuura, Corsight inoti iri kutoshanda pamwe nenhandare dzendege pamwe nemitumbi yakasiyana yehurumende. MuIsrael, iyo femu iri munzira yekuita bvunzo yemutyairi pachipatara chisingazivikanwe.
"Vazhinji vevatengi vedu hatigone kuburitsa pachena nekuti imasangano enjere uye akakosha ekuchengetedza mutemo munyika dzakasiyana," akadaro Ronen. "Ndinogona kutaura kuti takaendeswa mumapurisa akati wandei muAsia, Europe uye kunyangwe muIsrael."
Ofer Ronen (Kutendeseka)
Kana ikabatanidzwa neye-thermal-imaging kamera, iyo sisitimu inogona kubatsira neCOVID-19 yekutaurirana kuteedzera nekutsvaga avo vane yakakwira tembiricha yemuviri uye kumaka iwo kuti aongororwe manyore.
Kana munhu achinge asimbiswa kuva nefivhiri, iye anongowedzerwa kune dhatabhesi iyo inounganidza nzvimbo dzese dzakashanyirwa nemunhu dzine mifananidzo yekamera. Vaya vakasangana padhuze vaigona kubva vanyeverwa.
"Kana tembiricha yemuviri iri pamusoro pe 38 ° Celsius (100.4 ° F), zvinongoerekana zvaiswa musystem yedu," Gad Hayut, director wezvehunyanzvi kuCorsight AI, akatsanangurira The Media Line.
"Isu tinobatanidza izvi nehunyanzvi hwekuziva kumeso," akatsanangura, "uyezve, pese kamera painomuona [munhu wacho], tichaziva kuti aityisidzira pane imwe nguva."
Ndeupi mhando yedata inochengetwa? Izvo zvinoenderana zvizere nemutengi nemitemo yemuno, sekureva kwaRonen, uyo anosimbisa zvakare kuti Corsight AI haibate nedivi redata reiyo kuzivikanwa kwechiso equation. Asi, mutengi, senge anoshandisa mutemo, anosarudza kuti ndeipi dhata rekuchengetedza, uye kupi.
"Isu tinopa maturusi ekubvumidza mashandiro epamusoro tichichengeta data rakachengetedzwa padiki kuitira kutsigira kudiwa kwehukama," akadaro. "Kugara kune ngozi nehunyanzvi hwakadai."
Chokwadi, sisitimu dzakadai padzinoramba dzichingokura zvine simba, vamwe vanonetsekana kuti kuzivikanwa kwechiso kunogona kushandiswa pazvinangwa zvakashata nehurumende dzine masimba ekudzvinyirira vanhu vese. China, semuenzaniso, yakatoshandisa rudzi urwu rwetekinoroji kuratidza dzinza reUighurs, vazhinji vevaMuslim, maererano neWestern media media.
Kuti tigadzirise zvinonetsa izvi, Corsight AI yakaisa bhodhi rezvekuvanzika iro rakagadzirwa nevanotungamira kuchengetedzeka uye data-zvakavanzika nyanzvi. Iyo pani ine basa rekubvumidza yega bhizinesi dhizaini pane kesi-ne-kesi hwaro.
"Hatisi kuzotengesera kuhurumende [kana] tisina chivimbo chekuti havazoshandisa zvisina kufanira tekinoroji iyi," Ronen akasimbisa, achiwedzera kuti chinangwa ndeche "kuponesa hupenyu" neAI-powered system.
"Zvinogona kunge zviri kuponesa hupenyu nekutsvaga rimwe gandanga panhandare yendege, sekurwiswa kwebhomba kuBelgium," akadaro, achireva nezvebhomba ra2016 muBrussels umo vanhu 32 vakaurayiwa uye mazana evamwe vakakuvara munhevedzano yekurwiswa kwakarongeka airport uye chiteshi chechitima.
"Kana kuti inogona kushandiswa kuponesa hupenyu nekucherechedza munhu anorwara weCOVID-19 mumhomho, [achiona] uyo waaitaura naye uye achitarisa vanhu ava," akadaro.
SOURCE: Iyo Media Line: MAYA MARGIT
Delta Mhepo Lines inowedzera makumi matatu neshanu akashandisa Airbus neBoeing jets ku ...
Kufamba uchienda kuHawaii pawakabaiwa jekiseni: Mitemo mitsva
Mamiriro ekukurumidzira: Japan inorambidza vese vaoni kubva ...
Yekutanga kesi yeCOVID-19 yakataurwa muTokyo Olympic Village